Ubi Lavender Brihuega | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Oge ntụrụndụ
Ogologo oge, mpaghara lavender nke Provence abụrụla ebe dị mkpa maka njem nleta maka ndị hụrụ ime njem na ime obodo, ọdịdị na foto. Kwa afọ, ha na-adọta ọtụtụ puku ndị nleta na-achọ anyanwụ na-acha odo odo kachasị mma yana ahụmịhe kachasị mma na obodo ndị mara mma nke mpaghara ahụ.
Mana ruo ọtụtụ afọ, ọ dịghị mkpa ka ị gaa France iji nwee obi ụtọ n'ọhịa lavender. Na Spain anyị e imomiwo ndị agbata obi anyị na cultivation nke a magburu onwe aromatic osisi na obi jụrụ Njirimara. Obere ihe kariri nkeji iri anọ na ise site na Madrid bụ Brihuega, ọmarịcha obodo ndị Alcarrian bụ na n'ọnwa Julaị nke nwere ike iyi obodo ọzọ na French Provence.
N'oge ọkọchị, oge nke ifuru kachasị elu na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku hectare nke ahịhịa lavender gbara obodo ahụ na mpaghara ya gburugburu, nke na-enye ala pụrụ iche nke ụda olu na-acha ọcha na obi ọcha na obi Guadalajara. Brihuega abụghị Provence mana ọ bụrụla akara ngosi nke butere emume ọdịnala. O juru anya!
1 Otu esi aga Brihuega?
2 Mmalite nke ubi lavender nke Brihuega
3 Brihuega Lavender Ememme
4 Kedu ihe ị ga-ahụ na Brihuega?
Otu esi aga Brihuega?
Brihuega dị na ọdịda anyanwụ nke mpaghara Guadalajara, nke dị na mkpọda ala site na ndagwurugwu Alcarreña ruo na ndagwurugwu osimiri Tajuña. Ọ dị kilomita 33 site na Guadalajara, 90 site na Madrid na kilomita 12 site na Highway N-II. N'ebe ndịda ọdịda anyanwụ nke mpaghara Guadalajara na n'akụkụ aka ekpe nke osimiri Henares, mpaghara La Alcarria dị, ebe ọ bụ maka ọtụtụ isi obodo ya Brihuega.
Mmalite nke ubi lavender nke Brihuega
Brihuega abụrụla mgbe obodo nke ndị ọrụ ugbo na ndị na-azụ anụ nwere ụlọ ọrụ ụfọdụ ebe ọ bụ isi ụlọ ọrụ Royal Cloth Factory, nke na-arụ ọrụ ruo mgbe agha obodo Spanish gachara. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọnọdụ akụ na ụba malitere ịdaba na ọtụtụ ndị Alcarrian kwagara iji chọọ ohere ọrụ ka mma.
Ọ bụ mgbe ahụ ka otu onye ọrụ ugbo bi n’obodo ahụ aha ya bụ Andrés Corral mere njem gaa French Provence ma chọpụta ebe ndị a na-agba mmanụ lave na ohere ha nwere. N'ihi njirimara nke osisi ahụ, ọ ghọtara na ọ dị mma ịzụlite na Brihuega ma ọ malitere njem nke ịkọ ihe ya na ndị ikwu ya na onye na-esi ísì ụtọ. Ha wuru lavender kachasi mkpa distiller osisi nke na eweputa 10% nke mmeputa uwa ma were ya ka onye kachasi nma na Europe.
Ihe oru ngo a meputara otutu oru na mpaghara a wee mee ka ndi mmadu malite imeghari mpaghara nke na-amalite ịbanye na ya.
Brihuega Lavender Ememme
Ihe malitere dị ka ihe omume n’etiti ndị enyi aghọwo ihe omume iji nwee ọ gastụ pụrụ iche na ntanetị na ahụmịhe na ọnọdụ enweghị atụ. A na-eme ya na mbido owuwe ihe ubi lavender ma were ụbọchị abụọ. Kansụl Obodo Brihuega na-ahazi njegharị na-eduzi nke gunyere njem ụgbọ ala site na ogige María Cristina nke obodo, na ngwụcha izu ọbụla na Julaị.
Ozugbo Ememe Lavender gafere, a na-achịkọta ọtụtụ nde okooko osisi wee gafere site na nkwụsị ahụ, na-ewepụta ihe bụ isi ha wee bụrụ akụkụ nke ihe na-esi isi na mmanụ na-adịghị mma na ahịa.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Brihuega?
Brihuega dị na ndagwurugwu nke osimiri Tajuña ebe ahịhịa ndụ nke larịị kpatara ya aha nke Jardín de la Alcarria ekele maka ubi mkpụrụ osisi ya na ubi ya mara mma. E kwupụtara obodo Brihuega, nke nwere mgbidi nwere ebe akụkọ ihe mere eme na ebe ọdịnala dị.
Mgbidi ya malitere na narị afọ nke XNUMX na ọtụtụ narị afọ gara aga mgbidi ya chebere obodo ahụ kpamkpam. Ogige ya ugbu a buru ibu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita abụọ n'ogologo. Ọnụ ụzọ ya, nke Ogige Ball, nke Chain ma ọ bụ Arch nke Cozagón, meghere ihe nzuzo ya na akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ.
Castillo de la Piedra Bermeja dị na ndịda obodo ahụ. N'elu ebe ewusiri ike nke ndị Alakụba mbụ, agbakwunyere ụlọ ndị Romanesque na narị afọ nke iri na abụọ na emesịa e wuru ụlọ ụka Gothic na-agbanwe agbanwe.
Ihe ncheta okpukpe ya na-eme ka anyị banye na nkọwa nke mbubreyo Romanesque na ọdịiche nke ndị Gothic na njem ya niile: Santa María de la Peña, San Miguel ma ọ bụ San Felipe gosipụtara ya. Ihe foduru nke San Simón bụ ọla Mudejar nke zoro n'azụ ọtụtụ ụlọ.
N'etiti ụlọ ndị obodo bụ ụlọ nzukọ obodo na ụlọ mkpọrọ, ụlọ ndị Renaissance dịka nke Gómez na ndị ọzọ nọ na mpaghara ọhụrụ na San Juan. Mana obi abụọ adịghị ya na ezigbo ncheta obodo bụ ezigbo Fabrica de Paños, ebe a na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ Brihuega na onye ubi ya sitere na 1810 na-asọpụrụ aha aha obodo a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Brihuega Lavender Ubi